Izindaba zenkampani | Ezezimali Ezezimali (Ikhasi 2)
Ziyini izexwayiso zenzuzo?
Okuthiwa isexwayiso senzuzo ngaphezu kwakho konke isexwayiso mayelana nenzuzo? mayelana nenkampani efakwe kuhlu ezimakethe zezimali. Okuthiwa isexwayiso senzuzo ngaphezu kwakho konke isexwayiso mayelana nenzuzo? mayelana nenkampani efakwe kuhlu ezimakethe zezimali
Vele, igama lebhizinisi elisemthethweni lilalelwa kabanzi yingxenye enhle yezakhamizi, yize bazi kahle ukuthi iyini incazelo yalo. Umuntu osemthethweni unenkohliso okwazi ukusebenzisa amalungelo nokuthola izibopho zokwenza imisebenzi yakhe ehlukahlukene
Amanothi webhizinisi: tshala imali ngokunenzuzo enkulu
Amanothi ezethembiso zebhizinisi noma ezinkampani angumkhiqizo wotshalo-mali ongajwayelekile ngomqondo wokuthi awubhalisiwe ezimakethe zezezimali. De Iphepha lezentengiselwano lezinkampani noma izinkampani liwumkhiqizo wokutshalwa kwemali ngandlela thile ngomqondo wokuthi awubhalisiwe ezimakethe zezezimali
Amathuluzi asebenziseka kakhulu akhona emkhakheni wezezimali wokuqinisekisa ukuthi inkampani iyasinda, futhi ukukhula kwayo isilinganiso semali
UNadir uzoyeka ukuncoma ukuthi sinake kakhulu ukuphatha Isilinganiso Sezikweletu, ulwazi olubalulekile
Ibhondi ingaphezu kwakho konke ithuluzi elinamandla lesikweletu elisetshenziswa yizinhlangano ezizimele nezikahulumeni
Amafayela eToys 'R' Us wokuqothuka
Izindaba zokuqothuka kwamathoyizi zigxile emininingwaneni yezomnotho kuleli sonto. Kodwa uyazi ukuthi kwenzekani?
Ubuhlongandlebe obuphansi, ngenkathi kwenziwa izinyathelo zokuzivikela
Izinga lobugebengu ezinkampanini lehle kakhulu, ngaphezu kokungenisa izindlela ezintsha zokuvimbela lesi sehlakalo
Inethiwekhi yangaphakathi yeTelefonica, i-BBVA ne-Santander iyawa ngenxa yokuhlaselwa kwe-cyber
Ukuhlaselwa kwe-cyber kwinethiwekhi yangaphakathi yeTelefonica, i-BBVA, iSantander nezinye izinkampani ezinkulu.
I-Repsol Foundation Entrepreneurs Fund Campaign 2017
I-Fundación Repsol Entrepreneurs Fund Campaign 2017, i-accelerator yebhizinisi enikeza ukusekelwa kuma-startups asebenza engxenyeni yamandla
Ungayisebenzisa kanjani i-patent sha noma umbono
Nge-patent yombono wakho, ungathola ilungelo elikhethekile kuwo.Ukuze ube nelungelo lobunikazi ngombono kufanele ulungiselele amadokhumenti amaningana
Umbiko wezezimali ukuhlanganiswa kolwazi lapho umhlaziyi, ngokusebenzisa ukuphawula, izincazelo, iziphakamiso
UNaturhouse, inkanyezi yemakethe yamasheya ngoSepthemba
INaturhouse kwesinye sezibambiso eziheha abatshalizimali ngalesi sikhathi, uyafuna ukwazi izizathu?
I-invoyisi ye-proforma iwuhlobo lokusalungiswa kwe-invoyisi ejwayelekile neyamanje, kepha ngaphandle kokuba nenani lebhuku, ngoba kuyidokhumende edlule
Umkhiqizi omkhulu kawoyela womnqumo
Amafutha omnqumo ayigolide laseMedithera, liyingxenye yokudla kwethu kwansuku zonke, futhi asikwazi ukukhulelwa noma yikuphi ukudla ngaphandle kwamafutha omnqumo.
Imali yokuzimela iyikhanda kwabaningi: ukuyiqonda, ukuyamukela, ukuyikhokha nokuyifanisa, futhi kunezinhlobonhlobo eziningi
Umkhawulo Wenzuzo kanye Nesinqubomgomo
Sesizwile ngephuzu lokwephula umthetho kanye nezingqinamba zezinkampani noma amabhizinisi, kepha yini into evimbile noma evimbelayo?
I-Factoring ingumsebenzi wokuhweba ongasiza kakhulu uma unebhizinisi elincane. Uyazi ukuthi yiziphi izizathu?
Izinkampani ezi-10 ezinhle kakhulu ongazisebenzela eSpain
Sifuna ukuba phambili, futhi sifuna ukusebenza nabaphambili, akukho kungabaza ngalokho. Akunandaba ukuthi singososayensi, ...
Ukukhuphuka kwemali kuqukethe ukuhlinzeka ngemali eningi nezimpahla enkampanini, izindlela ezahlukahlukene zokwenza kanye nezinzuzo esizobona ngezansi.
I-Factoring yindlela yokusebenza yezimali ezinkulu ebhekiswe ezinkampanini ezincane neziphakathi nendawo. Thola izinhlobo, ubuhle nobubi.
Isoftware ye-ERP yenkampani yethu, umsizi obalulekile
Isoftware ibaluleke kakhulu enkampanini, ngakho-ke kufanele ukhethe okungcono kakhulu njengeSage ERP X3 Enterprise
I-Amazon ithathe isinqumo sokuhlukahluka, kule ndatshana sichaza ukuthi yini ukwahlukahluka nokuthi i-Amazon ikhethe hlobo luni.
Izinkampani zakwamanye amazwe ezisebenza eSpain zinethemba elikhulu ngomnotho wezwe womabili unyaka wezi-2014 nowezi-2015
Izinkampani eziyi-10 ezilawula ukusetshenziswa kwansuku zonke komhlaba
Sikunikeza uhlu lwezinkampani eziyishumi ezilawula ukusetshenziswa kwansuku zonke emhlabeni kanye nemikhiqizo eziqukethe
Izinkampani eziyi-10 ezingcolisa kakhulu emhlabeni
Inhlangano yeCarbon Disclosure Project iqophe uhlu lwezinkampani eziyishumi ezingcolisa kakhulu emhlabeni